Adeegyada Dheeraadka ah - STEPS AMEP
Home » Adeegyada Dheeraadka ah
Daryeelka Carruurta ee Bilaashka ah
Miyaad u baahantay daryeelka carruurta si aad uga soo qeybgasho fasalada Barnaamijka Ingiriisida ee Soo-galootiga Qaangaarka ah (Adult Migrant English Program- AMEP)? Daryeelka carruurta oo bilaash ah ayaa la heli karaa – kaas oo ku kooban carruurta ka yar da’da dugsiga – wakhtiga aad dhiganayso fasalkaaga.
Marka aan kulano waxaan ka wada hadli doonaa doorashooyinka daryeelka carruurta ee kugu haboon si aad sida uga badan uga faa’ideysato waxbarashadaada.
Waxku Barida Guriga
Macalimiinta gurigu waxay gurigaaga kugu siin karaa taageero barasho oo dheeraad ah. Taageerada Macalinka Gurigu waa BILAASH waxaanay ku siin kartaa caawimada kali-kalida ah ee aad u baahantay si aad u horumariso xirfadahaaga luqada.
Wadooyinka Luqad Dejinta ee Shaqada iyo Tobabarka (Settlement Language Pathways to Employment and Training – SLPET)
Si lagaaga caawiyo kala-guurka Ustareeliya, waxa laga yaabaa inaad u qalanto ka qeybqaadashada barnaamijka Wadooyinka Luqad Dejinta ee Shaqada iyo Tobabarka. Barnaamijkani wuxuu bixiyaa ilaa 200 saacadood oo dheeraad ah oo ah barashada luqada Ingiriisida taas oo diiradda saarta xirfadaha luqada Ingiriisida ee shaqada. Waxa sidoo kale SPLET ku jira ilaa 80 saacadood oo ah meelaynta khibradaha shaqo oo ah qeybo shaqo oo kala duwan, si ay kaaga caawiso inaad faham fiican ka hesho dhaqanka iyo waxyaabaha laga qabto goobaha shaqada ee Ustareeliya.
Barnaamijka Diyaar-garowga Gaarka ah (Special Preparatory Program)
Barnaamijka Diyaar-garowga Gaarka ah wuxuu bixiyaa 400 saacadood oo dheeraad oo ah fasalo Ingiriisi ah oo loogu talagalay macaamiisha ku imid bini’aadanimada ee u qalma, si loo aqoonsado baahidooda waxbarasho iyo taageero ee weyn ee ka imanaysa waayo-aragnimadoodii qalafsanayd ee soo haajirida kahor, sida jirdil ama jaah-wareer, iyo/ama waxbarasho hore oo xadidan.
Fasalada dadka ka yar 18 sanno jirka.
Soo-galootiga iyo dadka ku imid bini’aadanimada ee da’doodu u dhaxeyso 15 iyo 17 sanno jir, ee aan lahayn aqoonta Ingiriisida ee aasaasiga ah baahiyahoodana aan wax lagaga qaban waxbarashada caadiga ah, ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u xaq u yeeshaan ka qeybqaadashada barnaamijka. Guud ahaan ka qeybqaadashada waxa lagu go’aansadaa kiis calaa kiis, iyadoo la tixgelinayo xaaladaha shakhsiga ah iyo iyadoo lala tashanayo dugsiyada maxaliga ah.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyadeena dheeraadka ah fadlan naga soo wac 1300 585 868.